Sales Executive (Freight Forwarding) Archives - Glory Assumption Space
Sales Executive (Freight Forwarding) – Male / Female - ( 10 ) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ်
Sales Executive (Freight Forwarding) – Male / Female - ( 10 ) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ် ။ - Bachelor's degree in Sales & Marketing or other related fields. - Proficiency in English for writing, speaking and listening. - Minimum 2-3 years experience in freight forwarding and logistics sales. - Be able to use basic office program like Microsoft excel, power point, word or outlook. - Be able to bring in new potential customers. - Self-discipline, self-motivated, enthusiastic, innovative and sales-oriented with good sales communications and negotiation skills. - Working Hour – (9AM to 5PM) - Saturday , Sunday and Public Holiday GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒဂုံမြို့နယ် တွင်ရှိသော Logistic Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )